Furaat - Wikipedia
Fırat/ ܬܪܦ/פרת / Եփրատ
wabiga Furaat meel u dhow magaalada Xalabiye ee dalka Suuriya.
magacu wuxu ka yimid ereyga Beershiyaanka ah Ufrātu, taasi o ka timid ú-ip-ra-tu-iš
Balikh, Khabur, Sajur
Birekik, Ar-Raqqah, Deir el-Zoor, Mayadin, Xadisa, Ramadi,Xabbaniyah, Fallujah, Kufa, Samawah,
Nasiriyah; Harta Assad, Harta Qadisiyah, Harta Xabbaniyah
Harta Murat su ee dalka Turkiga
500,000 km2 (200,000 sq mi)
Isku celcelis: 365 m3/s (12,572 cu ft/s)
Furaat (Ingiriis: Euphrates, Carabi: ﺍﻟﻔﺮﺍﺕ: "al-Furāt", Af-Turki: Fırat, Siyriyak: ܬܪܦ: "Prath", Yuhuud: פרת "Prat", Armeniyan: Եփրատ: "Yeprat") waa wabiga ugu dheer iyo kan ugu taariikh muhiimsan deegaanada galbeedka Aasiya. Marka lagu daro wabiga Tigris waa dhulka loo yaqaano Mesobotaamiya ee ilbaxnimada aadamuhu ka bilaabantey. Wabiga Furaat oo dhererkiisu yahay 2,800 km (1,740 mi) kaas oo ka soo bilaabma harada Murad Su ee bariga wadanka Turkiga; qiyaastii 25 km koonfurbari magaalada Kara Su, iyo 30 km ka dib meesha uu ka soo bilaabmo webiga Tigris.
Qorniinka Quduuska ah waxay inoo sheegaan inay webiyada la yiraahdo Furaad (Yufraad) iyo Tigris (Xiddeqel) ay ka yimaaddeen Ceeden. Beerta Ceeden waxaa loo maleeyaa inay ku taallay meel maanta ah bariga Turki. Runtii, beerta Ceeden adduunka bay ku taallay. Ilaahay Aadan buu abuuray oo wuxuu dejiyay beerta Ceeden “inuu falo oo dhawro.”.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Furaat&oldid=221103"
Last edited on 24 Oktoobar 2021, at 18:52
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 24 Oktoobar 2021, marka ee eheed 18:52.